लोसपाले एमालेलाई सघाउँदा मधेशमा पाँचदलीय गठबन्धनको पोजिसन के ? | Janprabhabnews
लोसपाले एमालेलाई सघाउँदा मधेशमा पाँचदलीय गठबन्धनको पोजिसन के ?
26th January 2022 , 8:17 मा प्रकाशित
काठमाडौं । आज राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ । मुलुकभर हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा १९ सिटका लागि ४३ जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा ५ दलिय गठबन्धनको समिकरण बलियो छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समिकरण कमजोर देखिएको छ । कतिय प्रदेशहरुमा उसले गठबन्धन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।जसमा मधेश प्रदेशमा एमालेले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग गठबन्धन गर्ने सहमति गरेको छ ।
मधेश प्रदेशमा जम्मा १०४ जना सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख २ सय ६९ रहेका छन्।सांसदको मतभार ४८ हो भने प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हो । जसको जम्मा मतभार ९ हजार ८७० हुन्छ ।